Manor စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ NAB Show မှစာရေးဆရာ 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Author Archives: Manor စျေးကွက်
Author Archives: Manor စျေးကွက်
London, UK,2June 2020: Mo-Sys Engineering,aglobal leader in real time camera tracking and remote systems, today announced the launch of U50. Designed and manufactured during the lockdown period, the U50 isaheavy-duty remote head that enables camera operators to safely return to work and control the biggest box lenses and heaviest broadcast camera set-ups remotely. Offering ...
ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ Umea၊ ဇွန် ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ - အင်တာနက်ပေါ်မှအရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုများအတွက်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းမှုများအတွက်ဆွီဒင်၏ ဦး ဆောင်တီထွင်သူ Intinor Technology သည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော JB&A၊ တန်ဖိုးမြှင့်ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်သည့်ဗီဒီယို၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အိုင်ပီအခြေပြုဗီဒီယိုနည်းပညာ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော NewTek သည်အမေရိကန်အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်မှာ ...
၂၀၂၀ မေလ ၂၈ ရက်၊ မြူးနစ်၊ ဂျာမနီ၊ Cinegy က TURBOCUT ဟုကြေငြာလိုက်သည်။ NVIDIA GPU ၏ hardware decoder ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် H.28 / HEVC ၏တည်းဖြတ်မှုကိုသိသိသာသာမြန်စေသော Adobe CC plugin အသစ် ဤကြေငြာချက်သည် Adobe Premiere ၏ဗားရှင်း ၁၄.၂ ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ပါသည်။ ထပ်မံထည့်သွင်းထားသောအင်္ဂါရပ်အသစ်များ၊ သို့သော် NVIDIA ဟာ့ဒ်ဝဲမြန်ဆန်စွာတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် H.2020 နှင့်ကုဒ်နံပါတ်များအတွက် NVIDIA GPU ကိုအသုံးပြုနေသည်။
Umea, ဆွီဒင်မေလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ - ဆွီဒင်နိုင်ငံမှထုတ်လွှင့်သောအရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုများအတွက်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်သူ Intinor Technology သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုမ္ပဏီ Skaarhoj နှင့် universal broadcast control panel များထုတ်လုပ်သူများနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှက်သည့် webinars များတွင်အဝေးမှထုတ်လုပ်မှုကိုမည်သို့သရုပ်ပြမည်နည်း။ ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ Intinor မှရော ... ဝေးလံခေါင်သီသောထုတ်လုပ်ရေးကိရိယာများကိုမည်သို့ပြသမည်ကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ မေလ ၂၀ ရက်၊ ဂျာမနီ၊ မြူးနစ် - မိုးတိမ်တွင်ထုတ်လွှင့်ပြသသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် Cinegy သည် New Hampshire အခြေစိုက်ယူ။ အက်စ်။ တီဗွီနှင့်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်သူဖြန့်ချိသူနှင့်ရောင်းအားကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက်ကြော်ငြာစျေးကွက်ဖြန့်ဖြူးသူ မြောက်အမေရိကစျေးကွက်။ အမေရိကန်အသံလွှင့်ဌာန CTO အဲရစ်ပရက်တ်က“ အမေရိကန်အသံလွှင့်ဌာနသည်လတ်တလောတွင်အလုပ်များနေသောလက်လီရောင်းချသူများနှင့်အလုပ်များနေသည်။
GB Labs သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိရန်အတွက် ATTO 360 Tuning, Monitoring and Analytics Software များကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီစေသည်
Aldermaston, အင်္ဂလန်၊ မေလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၂ - အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာသိုလှောင်မှုစနစ်၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော GB Labs သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်၊ သိုလှောင်မှုဆက်သွယ်မှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများ၏ခေါင်းဆောင် ATTO Technology, Inc နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ GB Labs CORE.18 operating system ဖြင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် Analytics ဆော့ဝဲ။ ATTO FastFrame ™ Ethernet adapters နှင့်ThunderLink® Thunderbolt အပ ...
iSIZE Technologies ကဖွင့်လှစ်လိုက်သော Oxford CDL မှဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး Silicon Valley angel နှင့်အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှပေါင် ၇၄၀ ကျပ်ရရှိ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မေလ ၁၄ ရက်၊ လန်ဒန်၊ နက်ရှိုင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီ iSIZE Technologies သည်၎င်း၏ပထမဆုံးမျိုးစေ့ရန်ပုံငွေအစီအစဉ်ကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Inovia Capital မှမိတ်ဖက်ဖြစ်သူ Patrick Pichette နှင့် Google CFO အပါအ ၀ င်ကိန်းဂဏန်းများမှစုစုပေါင်းပေါင် ၇၄၀ ကီလိုဂရမ်ရရှိခဲ့သည်။ TD Veen AS၊ ထင်ရှားသောနော်ဝေမိသားစုရုံး၊ နှင့်အခြား CDL ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတော်ကြာ။ ဤအလှည့်အပြောင်းသည် iSize စုစုပေါင်းရန်ပုံငွေကိုယနေ့အထိရရှိစေသည် ...
Mo-Sys သည် LiveLab ကို Panasonic ဖြင့်စတင်သည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၄ ရက်၊ လန်ဒန်၊ ဗြိတိန်။ ။ အချိန်မှန်ကင်မရာခြေရာခံခြင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောစနစ်များတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင် Mo-Sys Engineering သည် Panasonic နှင့်ပူးပေါင်းကြောင်းကြေငြာခြင်းကိုဂုဏ်ယူသည်။ AW-UE4 နှင့် Mo-Sys StarTracker module တို့သည် AR နှင့် virtual studio ဂရပ်ဖစ်များကိုသဘာဝအတိမ်အနက်နှင့်အတူတကွဖန်တီးခြင်းနှင့် virtual နောက်ခံ၏ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။ ယခင်ကစတင်ရန်စီစဉ်ထားသည် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 6412345 » 102030...နောက်ဆုံး»